Dowlada oo Qorsheyneeso in ay qorto Macalimiin Cusub – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo Qorsheyneeso in ay qorto Macalimiin Cusub
Dowlada ayaa lagu wadaa in bisha soo socota inay 7,000 oo barayaal shaqaaleysiiso si loo yareeyo dhibaatada ka jirto macalin yaraanta saameysay scoolada dowlada guud ahaan dalka.
4,000 oo kamid ah macalimiintaasi ayaa waxa uu qorshahu yahay in la geeyo dugsiyada sare ee dowlada halka inta kale ee soo hartana loo daabuli doono schoolada hoose dhexe.
Wasiirka waxbarashada oo arintaasi ka dhawaajiyay ayaa sheegay in dowlada ay dooneyso sidii loo dar dar galin lahaa tirada ardayda iyo kuwa mcalimiinta oo hadda farqi weyn uu u dhaxeeyo taaso oo sahleysa sida uu sheegay in la helo tayo waxbarasho.
Wasiirka ayaa sheegay in ku dhawaad 136,000 aysan helin waxbarashada fasalka koowad ee dugsiyada sare taas oo sabab u ah macalimiin bahsan oo dalka ka jirto.
Matiangi oo ka hadlayay Countiga kisii oo ka qeyb galayay xaflad abaal marin ahayd oo uu marti sharaf ka ahaa ayaa dhanka kale waxa u sheegay dowlada ay u meel dhigtay dugsiyada qaran lacag dhan 50 Milyan si dugsiyadaasi oo ah kuwa intabadan kuyaalo Countiyada kisii iyo Nyamira diyactar loogu sameeyo.
Tani ayaa ku soo aadeysa kadib markii ururka Macalimiinta ee magacooda loo soo gaabiyo KNUT ay calanka casaanka ah ka taagen arimaha la xiriira macalimiin la’aanta bahsan oo ay ku eedeeyen dowlada iyagoo sheegay in ay ku fashilantay arrimahaasi.
Ugu dambeynti Wasiirka oo soo hadal qaaday falalka ay arday dugsiyada ku gubayaan ayaa waxa u sheegay in arimahan ay waalidiinta lugaha kula jiraan maadama anshaxa caruurtooda aysan ogeyn.
← Dowlada oo loogu baaqay in ay soo saarto shuruuc ay maamulayaasha dugsiyada ardayda ku edbin karaan
Arday kor u dhaafeysa 10 oo dhaawac kasoo gaaray dugsigi ay dhiganayeen oo u xalay dab ka kacay →
1 thought on “Dowlada oo Qorsheyneeso in ay qorto Macalimiin Cusub”
Maxa labadiya kuwi sijogay aya mishaar la’aan kacabanayaan